ROBLOX 2.355.241665 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.355.241665 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
ကစားဘို့အကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလူမှုရေးပလက်ဖောင်းမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ လစဉ်လတိုင်း, သန်း 64 ကျော်တက်ကြွကစားသမားစိတ်ကူးမှ Roblox ထံသို့ လာ. , ဖန်တီး, ရုံသင်တို့ကဲ့သို့ဂိမ်းကစားသဖြင့် built စွဲငြိဖွယ်ရာ 3D ကမ္ဘာအတွင်းအတူတူဆော့ကစား! အကောင့်ရှိပြီးသားလား? သင့်ရဲ့လက်ရှိ Roblox အကောင့်နဲ့ Log နှင့်ယခု play!
USER မှ-generated ဂိမ်းများထောင်ပေါင်းများစွာ၏
Roblox အတွက်အရာအားလုံးအသုံးပြုသူ-generated ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားများ, အဆုံးစွန်ဆောင်ပုဒ်ပန်းခြံဖန်တီးနေတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပြိုင်ပွဲကားတစ်စီးမောင်းသူအဖြစ်ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ဖက်ရှင်ရှိုးအတွက်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးစူပါဟီးရိုးဖြစ်လာ, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးအိမ်မှာနေတဲ့အိပ်မက်ကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူထွက်ဆွဲထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလုံခြုံအလယ်အလတ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, စိတ်ကူးစိတ်သန်းထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအုပ်စိုး။
ဂိမ်းများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုတစ်ခုအဆုံးမဲ့အမျိုးမျိုးအတွက်ကွန်ပျူတာများ, စမတ်ဖုန်း, တက်ဘလက်, Xbox One မှာများနှင့် VR အနှံ့ကအခြားကစားသမားများကသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်သန်းပေါင်းများစွာသောနှင့်အတူထွက်ဆွဲထား!
သစ်တစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပေါ် ယူ. ဦးထုပ်, ရှပ်အင်္ကျီ, မျက်နှာများ, ဂီယာ, များစွာသောတစ်ခုန့်အသတ်အမျိုးမျိုးနှင့်သင်၏ကိုယ်ပွားတက်ဝတ်စားဆင်ယင်တာကပို!
In-ဂိမ်းချက်တင် features တွေ, ပုဂ္ဂလိကမက်ဆေ့ခ်ျများ, နှင့်အုပ်စုများကို အသုံးပြု. အွန်လိုင်းသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ပါ!
Roblox ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ကစားသမားလည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပွားဘို့အတွက်ဂိမ်းအဆင့်မြှင့်သို့မဟုတ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအပေါ်ဖြုန်းဖို့ Robux (Roblox ပေါ်မှာငါတို့က virtual ငွေကြေးကို) ဝယ်ယူရန်အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံသုံးနိုင်သည်။ ကစားသမားများမှာလည်းအပိုအခွင့်ထူးများနှင့်နေ့စဉ် Robux ထောက်ပံ့ကြေးပေးသည်သည့် optional ကို "ထည်ဆောက်ကလပ်" အဖွဲ့ဝင်, (ပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့ "ထည်ဆောက်ကလပ်" ထို့နောက် app ထဲမှာမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်က "ပို" tab ကိုထိပုတ်ပါနှင့်) ဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။
အခမဲ့သင့်ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်း CREATE: https://www.roblox.com/develop
သတိပြုပါ: တစ်ဦးကကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှုကစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ Roblox ဂိမ်းကို Wi-Fi ကိုကျော်အကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ကြသည်။
apk-4-free စတိုး 327.83k 87.75M
APK ဗားရွင္း 2.355.241665
Release date: 2018-09-25 06:10:07